Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Fifaninanana lava-pandeha an-tanety an-tanety indrindra ho an'ny farihin'i Tahoe
Ny hazakazaka an-tanety lava indrindra an-tanety an-tanety dia eo am-paompy ao anatin'ny “Tahoe Vista Paddlefest” fanao isan-taona faha-8 - 10 septambra 2017. Faran'ny famaranana ny Tahoe Cup Paddle Racing Series nofonosina hetsika natao ho an'ny fianakaviana, mozika ary fahasalamana maro hafa ary ny hetsika ara-pahasalamana ao amin'ny Mourelatos Lakeshore Resort any Tahoe Vista, CA.
Ny fandaharam-potoana dia misy ny "Women on Water" amin'ny 8 septambra, "The Butterfly Effect" amin'ny 9 septambra, ary ny famaranana ny "Tahoe Vista Paddlefest" amin'ny 10 septambra miaraka amin'ny hazakazaka paddleboard "Fall Classic" maharitra 22 kilaometatra arahin'ny fety eny amoron-dranomasina.
Manomboka amin'ny zoma 8 septambra ny festival amin'ny "Women on Water". Ny tontolon'ny hetsika dia misy karazana klinika paddleboard mifantoka amin'ny vehivavy lalina mba hananganana fahaiza-manao sy fahatokisan-tena manokana. Misokatra ho an'ny sokajin-taona rehetra sy ny fahaizan'ny paddleboard ny Tetikasa.
Ho famenon'ity fankalazana mankafy sy fiainana fomba fiaina salama ity, ity festival ity dia hampiantrano ny "The Butterfly Effect", izay natokana ny sabotsy 9 septambra miaraka amin'ny hetsika paddleboard, SUP Yoga, ary seminera fahasalamana handray soa amin'ny Boarding for Breast Cancer.
Ny fandaharam-potoana Butterfly Effect dia misy koa ny fanadiovana amoron-dranomasina ho an'ny vondrom-piarahamonina mba hampielezana ny fahafantarana ny fiarovana ny kianja filalaovana sy hitazonana ny manga Lake Tahoe.
Ny alahady 10 septambra izao dia lehilahy sy vehivavy 150 eo ho eo ny mpamily sambo maneran-tany handray anjara amin'ny "Fall Classic" izay famaranana amin'ny Tahoe Cup Paddle Racing Series ary ny lanonana lehibe indrindra amin'ny festival. Ity no hazakazaka paddleboard an-tanety lava indrindra eran'izao tontolo izao izay hanomboka amin'ny tendrony atsimon'ny Farihin'i Tahoe ary hahatratra 22 kilaometatra hatramin'ny tsipika fahatongavana ao amin'ny Mourelatos Lakeshore Resort eo amin'ny North Shore an'ny Lake ao amin'ny Tahoe Vista, CA.
Ny fankalazana ny Alahady ao amin'ny Resort dia misy ihany koa ny Ceremony Loka, hazakazaka paddleboard mifantoka amin'ny fianakaviana, fety amoron-dranomasina, mpivarotra eo an-toerana, mozika mivantana ary nahandro sakafo kamiao eo an-toerana.